Featured Featured-Jikada qasabadaha, filler filler, Musqusha qasabadaha
Bogga ugu weyn / Waxyaabaha Lagu Soo Bandhigay
Ku shaandhee qiime
Guji si aad u shaandhayso
Qandaraasyada La Muujiyey
WOW WAAD TAHAY FANSAYAAL WELFARE !!! Daryeel 1. Hadiyad Bilaash ah jillaabooyin laba jibbaar ah ayaa lagu siiyaa bilaash !! Qof kastaa wuxuu heli karaa hal shey oo bilaash ah. Sida loo dalbado hadiyadda: Tallaabada 1: Booqo www.wowowfaucet.com. Tallaabada 2: Isdiiwaangal oo soo gal. Talaabada 3: U dir fariin ama emayl WOWOW FAUCET Adeegga Macaamiisha. Fadlan noo sheeg magaca koontadaada diiwaangashan iyo cinwaanka dhoofinta. Daryeel 2. Ma dooneysaa waxyaabo badan? Kula tali saaxiibbada inay kaqeybqaataan hawshan. Labadaba saaxiibkaa iyo adigu waxaad heli kartaa hal hadiyad. Waxaad kula talin kartaa 4 asxaab ugu badnaan. Sida Looga Qaybqaato: Marka asxaabtaadu ay kaqaybqaataan waxqabadka, fadlan u fiirso iyaga inay u diraan macluumaadkan iimaylkeena. 1. Ayaa kugula talinaya inaad kaqeybqaado nashaadaadan? Fadlan sheeg magaca akoonkiisa diiwaangashan. 2. Magaca koontadaada diiwaangashan. 3. Cinwaanka rarka. Fiiro gaar ah: IP kasta, isticmaale kasta iyo cinwaan kasta oo dhoofinta ah waxay ka qaybqaadan karaan oo keliya waxqabadka kor ku xusan hal mar. Haddii aad ku casuuntid saaxiibkaa inuu ka qaybgalo nashaadaadka, waxaad heli kartaa hadiyado badan. Laakiin inta ugu badan ee hadiyado hal qof la siiyo waa afar.
WOWOW Qalabka dahabiga ah ee loo yaqaan 'WELOW Gold Towel Hooks'
La iibiyey: 36